Wararka - Xirfadda dayactirka albaabka alwaax iyo fiiro gaar ah u leh isticmaalka maalinlaha ah
Daaqada Daawaha Aluminium
Xirfadda dayactirka albaabka alwaax iyo fiiro gaar ah u leh isticmaalka maalin kasta
Qurxinta casriga ah, albaabka alwaaxda awgood wuxuu leeyahay astaamo uxirnaanshaha muuqaalka dabiiciga ah iyo saameyn kaladuwan oo qurxin leh, waxay noqotay dad badan oo dadku doortaan inay qurxiyaan qolka. Marka ka dib marka alwaax alwaax ah la rakibo, sidee loo hubiyaa nolosha adeegga ee albaabka alwaax in yar ka sii dheeraado habka isticmaalka? Arrintaan, Mujiang wuxuu soo bandhigi doonaa xirfadaha dayactirka iyo taxaddarrada isticmaalka maalin kasta ee albaabbada alwaaxda oo faahfaahsan. Aan baranno.
Nadiifinta dusha sare Nadiifinta maalin kasta boodhka iyo wasakhda dusha sare ee albaabka alwaax waa shaqada dayactirka aasaasiga ah, laakiin sidoo kale waxay u baahan tahay dulqaad. Markaad ka saareyso wasakhda dusha sare ee albaabka alwaax, maro cudbi jilicsan waa in loo isticmaalaa in lagu tirtiro, maxaa yeelay way fududahay in lagu xoqo dusha sare maro adag. Markay wasakhdu aad u muuqato, waxaad isticmaali kartaa wakiilka nadiifinta dhexdhexaadka ah, cadayga ama wakiilka nadaafadda gaarka ah. Ka dib markaad saarto wasakhda, tirtir qalalan. Ha ku dhaqin biyo. Feejignaan dheeri ah waa in la siiyaa xaqiiqda ah in marada lagu qooyay reagent dhexdhexaad ama biyo ah in aan la dul saarin dusha sare ee albaabka alwaaxda muddo dheer, haddii kale waxay dhaawaceysaa dusha sare waxayna beddeleysaa midabka ama diirisaa waxyaabaha ku dhammaanaya dusha sare. Intaa waxaa dheer, fiiro gaar ah u yeelo geesaha albaabka alwaax, ha xoqin wax badan, haddii kale waxay sababi doontaa rinjiga geeska inuu ka dhaco. Boorka alwaaxda alwaaxa ayaa lagu nadiifin karaa faakiyuumlaha.
Marka lagu daro dadaalka nadiifinta dusha sare ee si wanaagsan loo sameeyo, qalabka albaabka alwaaxda sidoo kale waxay u baahan yihiin in si taxaddar leh loo ilaaliyo. Sababtoo ah astaamaha yaraanshaha qallalan iyo fiditaanka qoyaanka, dildilaac yar ama yaraansho ayaa dhici kara marka heerkulka iyo qoyaanku aad u kala duwan yihiin. Waxa aan ogaan karno waa isbeddelka cimilada, yaraanshaha alwaaxda iyo ifafaale kale waa ifafaale dabiici ah. Laakiin haddii tayada albaabka alwaaxku aanu fiicnayn, ama albaabka alwaaxku aanu ahayn badeecado u qalma, albaabka alwaax waa fududahay in la qaabeeyo. Sidaa darteed, dooro tayada albaabka alwaax asalka ah, illaa iyo inta uusan ujeedo ula kac ah u lahayn, ma aha wax aad u fudud in la muujiyo ifafaale dildilaac ah.
3. Faahfaahinta waxay la xiriirtaa nolosha adeegga ee albaabbada alwaax. 1. Si loo tixgeliyo awoodda rarka ee albaabka, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo laalaadda walxaha culus ee caleemaha albaabka, si looga fogaado isku dhaca iyo xoqitaanka walxaha fiiqan. Markaad fureyso ama xireyso albaabka, ha isticmaalin xoog badan hana ku dhufan albaabka alwaax. 2. Ha ku furin qufulka albaabka gacmo qoyan, ama waxaad ku daadinaysaa miraha wax lagu shubo ee albaabbada alwaaxda iyo qufulkiisa. 3. Furaha, qufulka albaabka iyo waxqabadyada kale ee soo noqnoqda ee qalabka guryaha, isla markiiba ku adkee markii uu dabco. Haddii qufulka albaabku shaqeyn waayo, waxaad kudarikartaa qaddar ku habboon xumbo qalin godka muhiimka ah, laakiin si saliim ah haku marin saliid. 4. Haddii aad rabto inaad ilaaliso midabka dhalaalaya ee albaabka alwaax, waxaad si joogto ah wax ugu samayn kartaa wax-qabadkeeda. Si looga fogaado dhibaatada ka jirta dayactirka albaabada alwaax mustaqbalka, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dadaal dheeri ah marka wax la iibsanayo. Albaabka alwaax ee asalka ah, waxa ugu horreeya ee laga fiirsadaa waa in la doortaa sumad wanaagsan, kala sooc qaar ka mid ah "albaabka alwaax asalka ah" ee ka muuqda suuqa. Maalmahan, suuqa albaabka alwaax asalka ah waa kulul. Looma diidi karo in albaabo alwaax been abuur ah loo isticmaalo albaabada alwaax asalka ah. Si loo yareeyo kharashka, qoryaha hadhaaga ah ayaa loo adeegsadaa xardho, xabagta xabagta ayaa loo isticmaalaa in lagu been abuurto qoryaha oo dhan. Kuwani waa macaamiisha waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan.
Halkan, Mujiang ayaa ku xusuusinaysa: qaar ka mid ah soo saarayaasha yaryar ayaa alaabada ceyriinka ka iibsada suuqa qoryaha waxayna si toos ah ugu farsameeyaan alaabooyinka dhammaaday. Si loo fududeeyo habka wax soo saarka, diiwaanada iyada oo aan la ilaalin caafimaadka, hoos u dhaca, jilicsanaanta fiber iyo qalajinta ayaa si toos ah loo shaqeeyaa loona iibiyaa, taas oo keenta ifafaalaha dambe.
Waqtiga boostada: Nofeembar-13-2020
Muuqaalo Video ah
Xirfadda dayactirka albaabka alwaax iyo atte ...
Maxay dad aad u tiro badani u doortaan ecologica ...
Adeegyada Macaamiisha: 18931163337